निजी शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि के गर्दैछन् दोलखाका स्थानीय सरकार ? - Edolakha
निजी शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि के गर्दैछन् दोलखाका स्थानीय सरकार ?
1 year ago/Saturday, June 8th, 2019
दोलखा, २५ जेठ ।
स्थानीय सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरलाई थप व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएपनि दोलखाका स्थानीय सरकारले यो अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकारले शिक्षा सम्बन्धि ऐन र कानुन बनाएर निजी बिद्यालय सञ्चालनको प्रभावकारी अनुगन गर्ने अधिकार पाएपनि यो अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न नसकेका हुन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरुको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्थानीय सरकारको अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार गठन भएको दुई बर्ष बितिसक्दा समेत शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा थप केही कार्यक्रम समेत सञ्चालन भएको देखिँदैन । यसअघि शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालको लागि अनुमति दिने, यसको प्रभावकारी अनुगमन, व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर लगायतको अधिकार पाएपनि अहिले स्थानिय सरकारले यसको जिम्मेवारी पाएको छ । तर पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको समुचित प्रयोग भने गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले निजी शैक्षिक संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मासिक शुल्कमा एकरुपता छैन । जसका कारण बिद्यालय अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको पाईन्छ ।
भिनपाद्धारा एउटा बोर्डिङ सञ्चालनको अनुमति
स्थानिय सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालनका लागि अनुमति पाएसँगै भीमेश्वर नगरपालिकाले एउटा बोर्डिङ स्कुल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ । नगरपालिकाले सदरमुकाम चरिकोटस्थित समता बोर्डिङ स्कुल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो । नगरपालिकाले गत बर्ष सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको समता स्कूलमा यो बर्ष एक कक्षा थपगरेसँगै अहिले दुई कक्षासम्म पढाई हुने गरेको छ । यस्तै, जिल्लाको जिरी नगरपालिका,शैलुङ गाउँपालिका र बीगु गाउँपालिकाले पनि एक÷एक वटा शैक्षिक संस्थाको एक÷एक वटा कक्षा वृद्धिका लागि अनुमति दिएका छन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आधारमा संस्थागत बिद्यालयलाई एक पटकमा एउटा कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिईने तथा एक पटकमा थप एक कक्षा मात्र अनुमति दिने प्राबधान रहेको छ । स्थानिय तहहरुले भने निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालनका लागि माग नगरेका कारण हालसम्म कुनै निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति नदिईएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कुन स्थानीय तहमा कति निजि विद्यालय ?
दोलखामा सबैभन्दा बढी भीमेश्वर नगरपालिकामा १३ वटा निजी शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन् । यस्तै बैत्यश्वर गाउँपालिकामा ७, बीगु गाउँपालिकामा ३, जीरी नगरपालिका, तामाकोशी गाउँपालिका र शैलुङ गाउँपालिकामा २÷२ वटा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । यस्तै, गौरीशंकर गाउँपालिकामा र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा १÷१ वटा निजी बिद्यालय रहेका छन् ।
नगरपालिकाभित्रको निजी बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाको बिषयमा हामीले भीमेश्वर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत अर्जुन कार्कीलाई सोधेका थियौँ । हाम्रो यो जिज्ञासामा उहाँले निजी र सामुदायिक दुबैको शैक्षिक गुणस्तर अघि बढाउन आँफुहरुले अनुगमन र मूल्यांकन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निजी बिद्यालयको शिकाई उपलब्धिको विषयमा तथ्यांक समेत माग गरेको र त्यसका आधारमा आगामि दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय तय हुने बताउनुभयो ।
२५ जेठ, २०७६ । १२ः ३० बजे प्रकाशित ।
VIEWS: 2585 पटक हेरीएको